Ingxelo yeNtengiso yeHlabathi ye-Inshurensi yoBomi 2021 | Iinkonzo zeendaba zeWire
Ikhaya » Iinkonzo zeendaba zeWire » Ingxelo yeNtengiso yeHlabathi ye-Inshurensi yoBomi 2021
Ingxelo yeNtengiso yeHlabathi ye-Inshurensi yoBomi 2021
Ingxelo yeNtengiso yeHlabathi ye-Inshurensi yoBomi ka-2021. Ingxelo yeNkampani ye-Inshurensi yoBomi yeNgxelo yeNtengiso yeHlabathi ye-2021: Impembelelo ye-COVID-19 kunye nokuBuyela ku-2030
Inkqubo ye-Robotic automation kunye nobukrelekrele bokufakelwa buye baguqula indlela elenziwa ngayo ishishini kwishishini leinshurensi. Inkqubo yeRobotic esizisebenzelayo kunye nobukrelekrele bokufakelwa zezi Intengiso yeinshurensi yobomi isetyenziselwa ukuqikelela ngokuchanekileyo iziphumo, ukuphucula inkonzo yabathengi, ukukhokela uphuhliso lweemveliso ezintsha, ukufumanisa ubungozi, kunye nokukhuthaza iimveliso. Umzekelo, i-Inshurensi yoBomi ye-Aditya Birla iphehlelele i-DISHA 2.0, i-ChatBot ye-AI-Enabled ChatBot yokufumana izisombululo ezizezakho ekukhetheni i-inshurensi yobomi. Olu phuhliso lobuchwephesha luya kukhulisa amava abathengi kwaye luya kuqhuba intengiso.
Yehlabathi ubungakanani bemarike yeinshurensi yobomi kulindeleke ukuba ikhule ukusuka kwi-2.47 yeetriliyoni ngo-2020 ukuya kwi-2.88 yeetriliyoni ngo-2021 kwinqanaba lokukhula ngonyaka (CAGR) eli-16.3%. Ukukhula ikakhulu kubangelwe ziinkampani ezilungisa imisebenzi yazo kunye nokuchacha kwimpembelelo ye-COVID-19, eyayikhokelele ngaphambili kuthintelo lwamanyathelo obambiso abandakanya ukudideka koluntu, ukusebenza kude, kunye nokuvalwa kwemisebenzi yorhwebo ekhokelele kwimiceli mngeni yokusebenza. Iimarike kulindeleke ukuba zifike kwi-3.51 yezigidigidi zeedola ngo-2025 kwi-CAGR ye-5.1%.
Amacandelo e-inshurensi yobomi kwingxelo yeNkampani yoPhando ngezoShishino yahlulwe ngohlobo kwi-inshurensi yobomi, i-inshurensi yobomi bonke, i-inshurensi yobomi eguquguqukayo, i-inshurensi yobomi ye-equity, i-inshurensi yokufa ngengozi, enye i-inshurensi yobomi, ngokufaka isicelo kwiarhente, kubarhwebi, kwi-bancassurance , iindlela zedijithali kunye ngqo, kunye nemowudi kwi-intanethi nakwi-intanethi.
Ingxelo ye-Inshurensi yeNtengiso yeHlabathi ka-2021: Impembelelo ye-COVID-19 kunye nokuBuyisa kwakhona ukuya ku-2030
Iiarhente zeinshurensi Ingxelo yeNtengiso yeHlabathi ngo-2021: I-COVID-19 Impembelelo kunye nokuBuyisa kwakhona ukuya ku-2030
Imarike ye-Inshurensi yoBomi beXesha- ngohlobo lweinshurensi (Inqanaba leInshurensi yoBomi yeXesha, kwiQela leInshurensi yoBomi, ukuNcitshiswa kweInshurensi yoBomi yeXesha), ngeSiteshi soSasazo (iiarhente ezibotshiweyo kunye namasebe, iiBrokers, iBancassurance), nangommandla, amathuba namacebo-- Uqikelelo lwehlabathi ukuya kuma 2030
Ababoneleli ngeInshurensi yoBomi Ingxelo yeNtengiso yeHlabathi ye-2020-30: I-COVID-19 Impembelelo kunye nokuBuyisa kwakhona